uphicotho lweencwadi / usd Archives - Iphepha 4 le-5
I-AUDUSD ejikeleze i-Dwindles kwi-1 yeNyanga ePhakamileyo ye-0.7817 phakathi kweRebound kwi-US Bond Yields
Uhlalutyo lwamaxabiso e-AUDUSD-Epreli 29
Isibini se-AUDUSD siwile ukusuka kwinyanga enye ukuya kwi-0.7817 ukubhalisa isezantsi kwi-0.7773 ngexesha lokubhalwa kwaye sagqityelwa ukubonwa sidada ngasemazantsi endlela yokurhweba kwemihla ngemihla ngexesha leseshoni yaseYurophu. Isaphulelo esivela kutshanje kwizivuno zebhondi zase-US sinokubalwa njengeziphambili ezisisiseko emva kokutsalwa kwesicatshulwa.
Amanqanaba okumelana: 0.7880, 0.7850, 0.7817
Amanqanaba enkxaso: 0.7725, 0.7650, 0.7513
Nangona iibhere kulindeleke ukuba ziphulukane namandla kufutshane ne-0.7770 amanqaku, ziya kujolisa kwinqanaba le-0.7725 kunye nomndilili wokuhamba (MA 200) indawo yenkxaso yolawulo ngakumbi ngaphambi kokuqinisekisa iintsuku eziphantsi ngelixa libetha inombolo yenkxaso ejikelezayo kufutshane nenqanaba le-0.7700.
Okwangoku, ukuphuma okuphezulu kwinqanaba elidlulileyo le-0.7800 kuyakufuneka kuhlangatyezwane nenqanaba eliphambili lokumelana ne-0.7850 ngaphambi kokuba iinkunzi zithathe uxanduva. Ngelixa usenza njalo, uphawu lwe-0.7817, oluphezulu kwiinyanga ezininzi, lunokutsala umdla wabatyali mali ngaphambi kwencopho yonyaka, ukubetha kwinqanaba le-0.7880.
I-AUDUSD's intraday bias ithambekele ekungathathi hlangothi njengokujika kwinqanaba le-0.7817 kunokuba nokujula ngakumbi. Ngenqanaba lokuxhasa elingu-0.7725, ukunyuka okuvela kwi-0.7513 kusekho ekuxhaseni ukuqala kwakhona urhwebo ukusuka kwinqanaba le-0.7880 ngokukhawuleza.
Ikhefu eliqinisekileyo lamanqaku e-0.7817, kwelinye icala, linokuqinisekisa ukuthotywa kwexesha elifutshane kunye nokushenxisa icala elisecaleni kulungiso olumandla. Kwixesha elizayo elingekude kakhulu, izinga lotshintshiselwano liza kuqala ukunyuka kwakhona. Iinjongo ze-AUDUSD zesibini kwiseshoni elandelayo yokuthengisa ziya kuba ziindawo ezi-0.7850.
I-AUD / i-USD Kwindawo yoMthengi!
I-AUD / i-USD ihlala ikwi-bullish kwixesha elifutshane ngaphandle kokuhla okomeleleyo kokugqibela. Kuyathengiswa kwinqanaba le-0.7747 xa kuthelekiswa ne-0.7764 ephezulu izolo.
Amaxabiso atyibilika ezantsi ngexesha lokubhalwa kuphela ngenxa yokuba i-US Dollar Index ibuyile kancinci. Namhlanje, sinokuba nokuguquguquka okuphezulu kuzo zonke iimarike ngexesha le-ECB. Kwakhona, iAmabango e-US yokungaphangeli, ukuThengiswa kweKhaya okukhoyo, kunye ne-CB ekhokelayo Index inokuzisa ubomi kwi-AUD / USD.
AUD / USD H4 Uhlalutyo lwetshathi!
I-AUD / i-USD ifumene inkxaso eyomeleleyo kwinqanaba le-0.7705, kanye ngezantsi komgca ophakathi (ML) kwaye ngoku kujongeka njengokuthengisa ngaphezulu. Ukwehla okwethutyana kwakulindelwe emva kokuba i-AUD / USD ifikelele kumgca we-median (ml) wefolokhwe encinci enyukayo.
Mhlawumbi esi sibini siza kubuya sizokuphinda sibuyele kumgca ophambili ophakathi (ML) ngaphambi kokuqalisa kwakhona ukukhula. Ukuzinza ngaphezulu komgca ophakathi wefolokhwe yomnatha kunokuzisa umfutho omtsha.
Ukusilela kwayo ukuzinza phantsi komgca we-median (ML) wokuhla kwefolokhwe kwimizamo yokugqibela ebonisa ukuba i-AUD / USD inokuphinda ikhule kwakhona.
tags Aud / USD, AUDUSD, Uhlalutyo lobuGcisa, Umbono woRhwebo
I-AUDUSD ejikelezileyo yokuFumana iTraction yoSuku lwe-2 phakathi kweDrop kwizivuno zase-US
Uhlalutyo lwamaxabiso e-AUDUSD-Epreli 15
Ngexesha lokuthengisa ngolwe-Lwesine, i-AUDUSD iphinde yafumana i-bias elungileyo kumhla we-2 ngokulandelelana, abatyali-mali ngoku befuna ukuqhubela phambili ngokuzinzileyo kumanqanaba e-0.7800. Imiba eliqela incedise umkhwa, kubandakanya ukuthengisa okungathandekiyo kwintengiso kunye nokwehla kwezivuno zase-US ngemo ethambileyo kwidola yaseMelika.
Amanqanaba okumelana: 0.8000, 0.7850, 0.7800
Amanqanaba enkxaso: 0.7700, 0.7650, 0.7585
Ixabiso lotshintshiselwano ngoku linyuka nge-0.7754 yeedola, ukuzama ukutyhubela imimandla eyi-0.7800. I-AUDUSD inokuba kumda wokuqhawuka ukuya kwinqanaba lonyaka eliphezulu kwi-0.8007 ephezulu. Ukuba uqhekeko lwenzeka, ukunyuka okudlulileyo kwimimandla ye-0.8000 kunokwenzeka ngo-Epreli. Nangona kunjalo uxinzelelo oluphezulu luyaqhubeka, abathengisi be-bullish banokufikelela kumgca olandelayo wokuxhathisa kwi-0.7800, ebekwe kwiimeko ze-RSI ezingaphezulu.
Ukuqhekeka okuqhubekayo komda we-0.7650 wokudibana, kwelinye icala, kuya kuqinisekisa ukuphela komqolo ojikelezayo ukusuka kwinqanaba le-0.7725. Ukuba ukuphakama okungu-0.7800 kuphindaphindwa kuqala, i-intraday bias inokujika inyuse. Ukophula amanqaku e-0.7800, kwelinye icala, kunokubuyisa ukulungiswa okuphantsi kwinqanaba le-0.7513.
I-intraday bias ye-AUDUSD ihlala ingatshintshanga, kugxilwe ekugxothweni kwe-0.7565 inkxaso ukuya ku-0.7761 ukumelana. Ngenxa yoko, ulwaphulo oluqhubekayo lunokubonisa ukuba ukubuyela umva kwi-0.8000 kwakusebenza. Ukuthothisa kwangaphakathi kwangaphakathi kuya kubuyiselwa umva kwicala eliphakamileyo ukuze uphinde ubenobude.
Ukophula inqanaba le-AUDUSD le-0.7800 kuya kuphakamisa ukukhula okuhlaziyiweyo ukusuka kwinqanaba le-0.7585. Umkhwa we-intraday uyakhula kwakhona. Kwaye okujolise kuko okulandelayo kwinqanaba lexesha elide le-0.8000. Kwelinye icala, idiphu engezantsi kwenqanaba elincinci lenkxaso le-0.7700 inokutshintsha i-bias ye-bullish kunye ne -orway ecaleni kworhwebo.
Izilayidi ze-AUDUSD emva kokwala i-0.7640
Inkcaso ephambili: 0.7640
Inkxaso ephambili: 0.7540
Kule veki i-AUDUSD yaphule inqanaba elikhulu lenkxaso mihla le / ngeveki kwaye ngoku ibuyile ukuyibuyisela ngeli lixa i-USD ihlangana nzima (+ 2.33% -3 yeveki yokuhamba)
Masijonge kwitshathi ye-2H ngoku kuseto.
Ixabiso laqhekeka ngenqanaba le-0.7640 ngelixa ukurhweba kwi-bearish ehambileyo. Eli nqanaba lihlangana nepivot yeveki (ekhatyiweyo) kunye nokubuyiselwa endaweni eyi-0.382 kwentshukumo ye-0.7850-0.7530 (-4.05%). Ikwahlangana kunye ne-76.4% yokubuyisela umlenze wokugqibela ezantsi.
Yonke into yalatha ekwehleni ngakumbi kwiAussie.
I-AUDUSD yandisa iiLahleko phantsi kweNqanaba le-0.7600, eliPhezulu liCap nge-Upbeat US Outlook
Uhlalutyo lwamaxabiso e-AUDUSD-Epreli 1
Isibini se-AUDUSD siwela kumhla we-4 ngokulandelelana okuphantsi ngoLwesine emva kokuba abathengi bephindaphindile ukophula ngaphaya komqobo we-MA 13 ojikeleze inqanaba le-0.7600. Esi sibini sandisa ilahleko ukuya kwinqanaba eliphantsi le-0.7531 njengoko imeko yezoqoqosho e-US inyusa i-AUDUSD kwaye ikhuthaza ukuthengiswa ngokutsha kwiindawo eziphezulu.
Amanqanaba okumelana: 0.8000, 0.7800, 0.7650
Amanqanaba enkxaso: 0.7461, 0.7220, 0.7000
I-AUDUSD yaphule inqanaba lokuxhasa elincinci kwinqanaba le-0.7557 ekuqaleni kweseshoni yaseYurophu. Ikhefu elisezantsi luphawu lokuthengisa olujolise kumanqanaba angaphantsi kwe-0.7500, mhlawumbi ukuya kuthi ga kwinkxaso eyomeleleyo kwinqanaba le-0.7461 lokuthatha inzuzo kwimfutshane. Zonke izinto zilingana, ireyithi yokutshintshiselana ye-AUDUSD ingaqhubeka ukuya ezantsi ngexesha leseshoni elandelayo yorhwebo.
Ujoliso olunokubakho lweebhere luya kuba kufutshane nenqanaba le-0.7414. Kwimeko enkulu, ngelixa ukubuyiselwa kwinqanaba le-0.8000 kuqhubeka, abukho ubungqina obaneleyo bokuqinisekisa ukubuyela umva kwe-bullish okwangoku. Oko kukuthi, kunokuba sisilungiso ngaphakathi kwendlela yokudibanisa yexesha elide. Kwicala elingaphezulu, ukubuya okunyanzelekileyo okudlulileyo kwinqanaba le-0.7650 kuya kubuyisa ukuzithemba kwabathengi kwinqanaba eliphezulu.
Kwisakhelo sexesha leyure ezi-4, izikhombisi zomfutho, nangona kunjalo, ngoku ziyakhuthaza ukuthengisa okuqhubekayo okwexeshana. I-RSI ibuyela kwicala elingaphezulu kwama-30, ngelixa iiyure ezi-4 ezihamba phakathi kwe-5 kunye ne-13 ziyawa kwaye ngaphezulu kwexabiso ngelixa zisengummandla ongalunganga.
Nangona kunjalo, ixabiso lokuvala ngaphezulu kokuchasana okuncinci kwinqanaba le-0.7650 kwiiseshoni ezilandelayo kunokunyusa inzala yokuthenga kunye nokuqinisekisa ukuzuza okongeziweyo kwizithintelo ze-0.7800, kuba ziphezulu nge-Matshi 2021. Kwimeko yokubuyela umva ngokuqinileyo, izithintelo ze-0.8000 zinokuba kukujolisa okulandelayo Kukuchasana okuchongwe ngoFebruwari 2021.
UKUBUYEKEZWA KWE-AUDUSD KWEENCWADI ZANGAPHAMBILI
Inkxaso ephambili: 0.7570
Ukuchasana okuphambili: 0.7700 - 0.7750 - 0.7850
I-AUDUSD iphinde yalikhaba kwinqanaba le-0.7520 emva kokuntywila phantse ii-pips ezingama-300 (-3.74%) ukusuka nge-17 ka-Matshi i-highs kunye ne-445 pips (-5.60%) ukusuka kwi-25 kaFebruwari ephezulu.
I-AUDUSD isekhona kakhulu kushukuma olukhulu lokunyusa kwaye eli nqanaba lenkxaso libeka umda kwicala eliphantsi lisinika ukuseta okuphezulu apha.
Okungakumbi ngenxa yokuba sithengisa ngaphakathi kwendoda kunye nexabiso malunga nokuqhekeka ngelixa kuprintwa ukwahluka okunzima kwe-bullish.
Phakathi kwe-Weaker Greenback, i-AUDUSD irejista yokuBuyisa okuMfutshane
Uhlalutyo lwamaxabiso e-AUDUSD-Matshi 25
Kwiseshoni yangoLwesine, isibini se-AUDUSD siphinde safumana emva kokungena kwinqanaba eliphantsi le-0.7578 yeedola, nangona kunjalo kwisibambiso esifutshane esi sibini sisusa ilahleko ngobusuku emva kokubetha kweyona iphantsi ukusukela ekuqaleni kukaFebruwari.
Amanqanaba okumelana: $ 0.7800, $ 0.7725, $ 0.7650
Amanqanaba enkxaso: $ 0.7557, $ 0.7461, $ 0.7414
Ixabiso lotshintshiselwano okwangoku likwimali eyi- $ 0.7578 kumzamo wokugqitha kubusuku obuphambili. I-AUDUSD inokuba ilungele ukuphuma ukuya kwi-MA 50 kwinqanaba le-0.7650. Ukuba ukuqhekeka kuvela ukunyuka kwinqanaba le-0.8000 kule seshoni kunokuba kulindelwe. Ukuba uxinzelelo olusezantsi lubambe nangona kunjalo, abathengisi be-bearish kunokwenzeka ukuba babethe ilayini yenkxaso ethe tyaba elandelayo kwinqanaba le-0.7461 kwiimeko ezigqithileyo ze-RSI.
Okwangoku, i-rally eyandileyo edlulileyo yenqanaba lokumelana ngokuthe tye (ngoku kwi-0.7650) inokubonwa. Inokuhlala imeko efanelekileyo inikezwe ukuba ihlala ingaphaya kwenkxaso yokunyuka komgangatho (ngoku ikwi-0.7578). Ukuqhubeka kokurhweba ngaphantsi kwamanqaku ayi-0.7600, nangona kunjalo, kunokubuyisela ugxininiso kwinqanaba eliphantsi ngaphantsi kwe-0.7578 emva koko.
Ngexesha elibekiweyo leyure ezi-4, i-AUDUSD ibuyisela umva intshukumo yayo esecaleni ukusuka kwi-0.7578 emva kokuphinda ibuye. Esi sibini sagqityelwa ukurhweba kwindawo eyi-0.7600, ngokungaguqukiyo ngemini. Ikhefu elingaphezulu kwe-MA 13 kwi-0.7620 kulindeleke, lilandelwe yimbuyekezo engaphezulu kwenqanaba le-0.7650.
Ukophula inqanaba le-AUDUSD le-0.7650 kuya kuphakamisa ukukhula okuhlaziyiweyo ukusuka kwinqanaba le-0.7578. Umkhwa we-intraday uyakhula kwakhona. Kwaye okujolise kuko okulandelayo kwinqanaba lexesha elide le-0.7800. Kwelinye icala, idiphu engezantsi kwenqanaba lenkxaso encinci ye-0.7557 inokutshintsha i-bias ye-bearish kunye nokuthengisa ecaleni.
I-AUD / i-USD ibuyela kwakhona kwinqanaba le-0.7760, iqala kwakhona kwi-Momentum engaphezulu
Amanqanaba aphikisayo aphambili: 0.8000, 0.8100, 0.8200
Amanqanaba enkxaso ephambili: 0.7700, 0.7600, 0.7500
Ixabiso le-AUD / i-USD yeXesha elide leNqanaba: Bullish
Isibini se-AUD / USD sikwi-uptrend. I-uptrend ijongene nokuchasana kwinqanaba le-0.8000. NgoFebruwari 25 uptrend; umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci engama-38.2%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba ixabiso liya kunyuka liye kwinqanaba le-2.618 yolwandiso lweFibonacci okanye inqanaba le-0.8697.
I-AUD / USD-Itshathi yemihla ngemihla
Isibini sikwinqanaba lama-52 leNdawo yokuDityaniswa kwamaNqanaba aMandla aHlanganisiweyo. Oku kubonisa ukuba isibini ngoku sikummandla wonyuselo-ntla nangaphezulu komgca osembindini wama-14. Esi sibini sinegumbi lokuhlangana phezulu.
I-AUD / i-USD yeXesha eliPhakathi lokuHamba: Bullish
Kwitshathi yeeyure ezi-4, esi sibini siwele kwinqanaba le-0.7700 kwaye saphinda saqala kwakhona. Ngomhla we-17 kuMatshi phezulu; umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci engama-61.8%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-Yen iya kunyuka iye kwinqanaba le-1.618 yeFibonacci eyandisiweyo okanye inqanaba le-0.7942.
I-AUD / USD-4 Itshathi yeYure
Isibini se-AUD / USD okwangoku singaphantsi kwe-80% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba isibini sikumfutho we-bearish. Ii-SMAs zijongela phezulu zibonisa uptrend.
Umbono ngokubanzi we-AUD / USD
Isibini se-AUD / USD sikwi-uptrend. Okwangoku, isibini sibuyela umva kwicala eliphantsi. I-uptrend iya kuphinda iqale ngokukhawuleza nje ukuba amaxabiso afumane inkxaso ngaphezulu kwe-SMA yeentsuku ezingama-21.
tags Aud / USD, Uhlalutyo lwamaxabiso
Idiphu ye-AUDUSD ithenga ngokudlala
Inkxaso ephambili: 0.7796
Ukuchasana okuphambili: 0.7850 - 0.7900
Umbono wexesha eliphakathi
I-AUD iqokelele i-14.6% ngokuchasene ne-USD ukusuka kumgangatho ophantsi oprintwe ngo-Okthobha u-2020, emva koko yabuya umva nge-4.80% ukusuka kwindawo ephezulu ngoFebruwari 2021 ukuphinda uzame inqanaba le-0.7650.
Umbono wexesha elide apha uyasebenza.
Izolo i-AUDUSD iqhekeze inqanaba elinzima lokuchasana kwaye kwiveki ephelileyo iphakamileyo iyaqhubeka nokuhamba kwayo ngaphezulu kwenqanaba le-0.7800.
Sihambe ixesha elide izolo kwaye iithagethi zethu zahlaselwa kwinqanaba elichanekileyo lokuchasana.
Ngoku elo xabiso liphuliwe kunye nelo nqanaba sijonge urhwebo olutsha olude ekubuyiseleni kwinqanaba langaphambili. Sifuna ixabiso lokophula kunye nolwakhiwo kwangoko lwe-bearish / yokubuyisa ngorhwebo ngaphezulu kweendawo eziphakamileyo zangaphambili (0.7823)